Luna, chikuva chemitambo cheAmazon chinotamba, chinovhurwa muna Chikumi 21 | Ndinobva mac
YeAmazon inotenderera yemitambo chikuva Luna inotangisa muna Chikumi 21
Zvinoita kunge izvo zviripo uye neramangwana rekuvaraidzwa kwedu kwedhijitari kunoenda kuburikidza neanozivikanwa «kumhanyira«. Chokutanga akauya mumhanzi. Nehunyanzvi chinhu chakareruka kutanga nacho. Zvakatanga Spotify makore apfuura, uye zvinotevera zvakatevera. Kubudirira kwacho kwaishamisa. Mazhinji emimhanzi akanzwika kutenderera pasirese nhasi ari kutenderera.
Uye shure kwake, vhidhiyo. Hapana chikonzero chekutsanangura kubudirira kwe Netflix uye ese epamhepo evhidhiyo mapuratifomu aripo nhasi, uye izvo zvakatikanganisa zvakanyanya mumwedzi iyi yedenda. Uye zvino mitambo yemavhidhiyo iri kutendererawo. Kune mamwe mapuratifomu akati wandei ari kubuda. Luna yeAmazon inotangisa June 21, inowirirana neMacs, iPhones uye iPads. Kunyangwe iri kunyangwe Apple.
Amazon ichavhura mukana wekusimudzira kune yayo nyowani yekumhanyisa yemitambo chikuva inonzi Luna musi waJune 21 na22, izvo zvinobvumidza chero munhu ane Amazon Prime account kuti aedze sevhisi nyowani iyo yekutengesa hofori yepamhepo ichatipa.
Vatengi veAmazon vanozokwanisa kuwana kwemazuva manomwe-emahara muedzo weLuna pa Amazon Prime Day, June 21 ne22. Kunyangwe iko kupi kwacho kwacho kuchinge kwakaganhurirwa munguva, vashandisi vanogona kusarudza kuchengeta kunyorera kwavo kuchishanda mushure mekuedzwa kwenyaya. Pakutanga, kupinda kuLuna kwaive nekukoka chete pamidziyo yeAmazon Fire TV.
Kubva ikozvino zvichienda mberi, chikuva chakavhurika kune chero chishandiso chine yakanaka internet kuwana. Luna ichave iripo kune macOS, Windows, Fire TV, pamwe nemafoni nhare senge iPhone, iPad uye Android kuburikidza newebhusaiti.
Amazon yakatevera mutsoka dzaMicrosoft
Amazon yakatevera mumakwara e Microsoft uchiona matambudziko aive neiyo Xbox hofori mukugona kuve neapplication yekuwana yayo xCloud yemitambo chikuva muApple Chitoro. Microsoft yakazokwanisa "kudzora" kuvharirwa kwakaisirwa neApple, ichiita kuti chikuva chayo chitambe kubva chero kupi web browser. Uye Amazon, yaenda kune "slipstream."
Kutanga kuziviswa munaGunyana 2020, Amazon Luna inosiyana neye aripo makore masevhisi senge xCloud nekuvimba ne "chiteshi" kana mutambo masumbu, senge Ubisoft +. Nenzira iyoyo, Luna yakafanana netambo yeTV kupfuura Netflix. Vashandisi vanosarudza "chiteshi" chavanoda kunyorera.
Luna slope 5,99 Euros pamwedzi neBasic Access, ichibvumira vashandisi kuwana mukana wakasarudzika wemazita akadai se "Kudzora", "Metro Ekisodho" uye "Grid". Vashandisi vanogona zvakare kunyorera kuUbisoft + beta chiteshi, iyo inopa mukana wekuwanda kwemazita emazita kubva kune iye anovandudza kwe € 14,99 pamwedzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mitambo » YeAmazon inotenderera yemitambo chikuva Luna inotangisa muna Chikumi 21
MacOS 3, watchOS 11.5, uye tvOS 7.6 mushambadzi beta 14.7 yakaburitswa